Wasiirka Dalxiiska Jamaica ayaa la kulmay Danjiraha Jamhuuriyadda Dominican u fadhiya Jamaica
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Wasiirka Dalxiiska Jamaica ayaa la kulmay Danjiraha Jamhuuriyadda Dominican u fadhiya Jamaica
Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dominican Republic • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Safiirka Jamhuuriyadda Dominican ee Jamaica iyo Wasiirka Dalxiiska Jamaica
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett, (oo sawirka midigta ka muuqda) ayaa salaamaya safiirka Jamhuuriyadda Dominican ee Jamaica, Mudane Angie Martinez Tejera, intii lagu guda jiray kulan gaar ah oo ka dhacay xafiisyadiisa 1 -dii Sebtember, 2021.
Labada hoggaamiye waxay ka wada hadleen xiriirka hadda socda iyo kan mustaqbalka ee u dhexeeya 2da ummadood.
Suurtagalnimada in la bilaabo duulimaad toos ah oo u dhexeeya Jamaica iyo Dominican Republic ayaa sidoo kale miiska saarnaa.
Dalxiiska Jamaica ee Wasaaradda ayaa weli ka go'an inay hubiso in waaxda dalxiisku ay suurtogal ka dhigto wax -ku -oolka buuxa.
Intii kulankoodu socday waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka Jamaica iyo Dominican Republic iyo weliba suurtogalnimada in la bilaabo duulimaad toos ah oo u dhexeeya labada dal.
Wasaaradda Dalxiiska ee Jamaica iyo hay'adaheeda ayaa ku jira hawl ay ku hormarinayaan oo wax ka beddeli doonaan Wax soo saarka dalxiiska ee Jamaica, iyadoo la hubinayo in faa'iidooyinka ka soo baxa waaxda dalxiiska loo kordhiyo dhammaan dadka reer Jamaica. Si taas loo gaaro waxay hirgelisay siyaasado iyo istiraatiijiyado siin doona dardar dheeraad ah dalxiiska oo ah mishiinka koritaanka dhaqaalaha Jamaican. Wasaaraddu waxay weli ka go'an tahay inay hubiso in waaxda dalxiisku ay kaalin buuxda ka geysato horumarinta dhaqaalaha Jamaica iyadoo la fiirinayo awooddeeda wax -soo -saarka ee baaxadda leh.
At Dalxiiska Jamaica Wasaaradda, waxay hormuud ka yihiin xoojinta xiriirka ka dhexeeya dalxiiska iyo qeybaha kale sida beeraha, wax soo saarka, iyo madadaalada, sidaasna waxay ku dhiiri gelineysaa qof kasta oo Jamaican ah inuu kaalintiisa ka qaato hagaajinta wax soo saarka dalxiiska ee dalka, joogtaynta maalgashiga, iyo casriyeynta iyo kala duwanaanshaha waaxda si kor loogu qaado kobcinta iyo shaqo abuurka dadka kale ee reer Jamaica. Wasaaraddu waxay u aragtaa tan inay muhiim u tahay badbaadada iyo guusha Jamaica waxayna howshan ku fulisay hab loo dhan yahay, kaas oo ay wadaan Guddiyada Dalxiiska, iyada oo loo marayo wadatashi ballaaran.
Anaga oo ogsoon in dadaal wada shaqeyn iyo iskaashi hufan oo ka dhexeeya bulshada iyo qaybaha gaarka loo leeyahay loo baahan doono si loo gaaro yoolalka la higsanayo, ayaa udub dhexaad u ah qorshayaasha Wasaaradda in la ilaaliyo lana kobciyo xiriirkeeda dhammaan daneeyayaasha muhiimka ah. Marka sidaas la sameynayo, waxaa la rumeysan yahay in iyadoo la raacayo Qorshaha Guud ee Horumarinta Dalxiiska Joogtada ah oo hage ah iyo Qorshaha Horumarinta Qaranka - Himilada 2030 oo ah halbeeg - himilooyinka Wasaaraddu waa kuwo la gaari karo oo ay ka faa'iideystaan ​​dhammaan dadka reer Jamaica.
D. Donner wuxuu leeyahay,
Oktoobar 31, 2021 at 20: 29
miyaanay qurux badnayn? Waxay u egyihiin laba doqon oo sidaas xusul u taabtay midna kama hortagayo faafinta fayraska kan kale inkasta oo waji-xidho iyo "photo opp" ay iska dhigeen.